I-mini-pi: ingulube enhle emndenini
Akukona nje isikhathi esidlule kwaba nemfashini ukugcina izingulube endlini yakho. Manje ingulube encane ingahlala ngqo endlini yakho. Futhi akekho ozokubheka njengesihlanya. Manje wonke umuntu angathola i-mini-pie ehlobisa ekhaya. Uma usenquma ukuthenga ingulube, kufanele ufunde imithetho yokuqukethwe kwayo.
Kancane kancane nge-pi
Izingulube ezincane yizingulube ezincane. Manje sebeba izilwane ezifuywayo ezidumile. Mhlawumbe abaningi bakho kakade kubonakele ku-YouTube okuningi kwamakhekheji wevidiyo. Izingulube ezincane zigcinwa ngisho nezinkanyezi zebhizinisi zokubonisa. U-Pigi uyinzalo ye-Vietnamese ingulube-izingulube. Ingqikithi yenani lezingulube ze-pygmy kulinganiselwa cishe cishe engamashumi amathathu. Isisindo esilinganisweni sabantwana abanjalo cishe ngamakhilogremu angu-20. Izingulube ezincane kunawo wonke zinesisindo esingama-9 kilogram.
Ingulube yokuphakama ingakhula ibe ngamasentimitha angu-30. Ama-pig angaba nemibala ehlukene. Ngakho ungakhetha ingulube yonke into enambithayo. Njengengane, umbala ungashintsha kancane ngobudala. Ama-pigs amnyama kuphela awawushintshi umbala. Uma unakekela izingulube, khona-ke angaphila iminyaka engu-15. Futhi ngakho-ke ngokwesilinganiso, isikhathi sokuphila kwabo sekuyiminyaka engu-12.
Izindleko zengulube encane kusuka kuma-dollar angu-300 nangaphezulu. Intengo ingafinyelela ezinkulungwaneni eziyizinkulungwane. Konke kuncike ngobukhulu nombala we-piglet. Futhi sekuphelile, kusukela emvelaphi yengane. Amancane ama-scrap, ayabiza kakhulu. Izingulube ezincane ezincane zithandwa kakhulu.
Thenga izingulube kuphela ezitolo ezikhethekile. Ingozi yengulube emakethe yezinyoni. Kukhona ithuba lokuthi uzosuswa ngokuphelele nge-nemini-pi. Futhi maduzane uzokhula abe yingulube ezodla konke ngendlela. Futhi-ke kuzokufinyelela kuwe.
Yini ongayidla ingulube encane?
Izingulube ezincane ziyi-omnivores, njengezingulube ezivamile. Uzodla konke okunikezwayo. Futhi kufanele kuqaphele ukuthi umngane omncane akazilawuli futhi angadla ngaphandle kokuyeka. Ngakho-ke, kubalulekile ukulawula ukudla okudlayo. Kufanele futhi ugcine umbuso wosuku. Ngaphandle kwalokho ingulube yakho encane izoba ingulube enkulu, ezobukeka ibhola ngemilenze. Ukukhuluphala ngokweqile kungaholela ezifweni ezihlukahlukene.
Ukudla kufanele kube izikhathi ezingu-2-3 ngosuku. Ukudla konke, uma kuhlala, kufanele kuhlanzwe ngokushesha. Ukuze ingulube ingalingi. Shintsha njalo amanzi. Esikhathini sakhe kufanele kube ngamanzi ahlanzekile. Imikhiqizo yokudla kufanele ihlanzwe kahle. Awukwazi ukondla kusuka etafuleni lokupenda. Ngoba ziyizinkumbi ezincane. Khona-ke le ngulube encane evela kuwe ngeke iwa ngemuva.
Ukudla kwengulube kufanele kube okuhlukahlukene. Isisekelo kufanele sibe yimifino, izithelo, okusanhlamvu, imifino yezimpande. Izingane zithanda kakhulu ama-apula. Ngakho-ke ungajabulela izithelo ezinjalo ngama-mumps futhi udla umzimba wayo ngamavithamini. Imifino inganikezwa ifomu eluhlaza futhi ephekwe, ingaba ithanga, i-beet, i-zucchini, izaqathe, ikhukhamba, amazambane. Badla noma yikuphi uhlaka (ibhali, irayisi, i-millet, i-buckwheat, njll). Njengengxenye yokudla, i-vithamini kumele inikwe amafutha enhlanzi, okusanhlamvu okuhluma, isinkwa esimnyama.
Ukudla okungamaphesenti angu-10 kufanele kube amaprotheni ukudla. Bathanda imikhiqizo yobisi (kefir, cottage cheese). Unesifiso esihle kakhulu, ngakho ungawusondeli. Unganikeli ingulube ukudla okusawoti, okubukhali, okudliwayo. Awukwazi ukumphatha ngezilwane zasolwandle nezitsha zangaphandle. Njenge-dessert, amapheya azofaneleka amapereya nama-apula.
Vala umnyango ekhishini. Ngenxa yokuthi izingulube ziqonda ngokushesha lapho isiqandisini futhi kungekudala zingakwazi ukuyivula ukufuna ukudla.
Uma unesitezi esishayo endlini, njenge-laminate noma i-parquet, khona-ke amaphepathi kufanele abekwe. Izingulube ezincane zezingulube zizohlala zihlezi.
Zonke izintambo, ama-heaters nezinye, kufanele zisuswe kude, ukuze i-pie ingakwazi ukuyifinyelela.
Zonke izinto eziyigugu kumele zifihlwe engxenyeni encane.
Ukuze uthole i-mini-piha kuyadingeka ukuba unikeze indawo yokuhlala. Isifuyo kufanele sibe nendawo endlini lapho angahlala khona. Akudingekile ukuthi uqukathe ingulube encane emvini ovaliwe. Uma ufuna isilwane sakho sibe esihle, senziwe kahle futhi sinomuntu ojwayelekile, khona-ke kufanele aphile ngokuthula. Ekamelweni lapho izingulube zihlala khona, kufanelekile ukubeka i-lounger noma i-mattress. Eceleni kwakhe wabeka amathoyizi akhe. Le ndawo izoba umbhede wakhe futhi ingulube encane izosetshenziselwa ukuwa.
Isilwane siselula futhi sithanda ukudlala nokugijima. Uyakuthanda abantu futhi uhlola zonke izingxenye zendlu. I-pig-mini ifana nenja encane, idinga amathoyizi kanye ne-leash yokuhamba. Kufanele kukhishwe nsuku zonke. Futhi ngenkathi kubanda, ungambeka itreyi yenkati. Ifriji kuphela, ngoba uzoba kuyo yonke indawo.
Ungaqala ukuqeqesha isilwane sakho. Mfundise amaqembu amancane. Isisusa esihle kunazo zonke izimpungushe kuyisiphuzo esimnandi. Ngaphandle negonichogo ngeke isebenze.
I-pig-mini ihlanzekile futhi kufanele ifundiswe ukubhekana nezidingo zazo. Uma kungekho ndlela yokuhamba nesilwane emgwaqeni, khona-ke angayenza endaweni ekhethiwe ngokukhethekile. Ama-pigs awachitheli futhi angenakho iphunga elimnandi. Bathanda ukugebha.
Ungabageza ngaphansi kwesha. Uma ufuna ukujabulisa ingane, ungagcwalisa ibhafu kubo futhi ingulube izogebha khona njengalokhu echibini. Isilwane sithokozela ngenjabulo futhi sishaye endlini yokugezela. Ngakho faka isitembu senjoloba phansi. Lokhu kufanele kwenziwe ukuze ingulube ingadluli ngamahlumela. Ngakho angashaya futhi abe nesaba.
Isikhathi sokusebenza esisebenzayo
Ama-pig afuna ukwazi futhi anamandla kakhulu. Kudingeka bachithe amandla abo, njalo badlale nabo futhi bahambe emgwaqweni. Ukuqondisa amandla abo ngendlela efanele, qala ukuqeqesha. Kuzokujabulisa wena ne-eum. Uma i-piugedetus ngokwayo engamukeleki, ngakho-ke ngenhloso yokujeziswa, chofoza ku-patch. Lona indawo ezwela kakhulu emzimbeni wakhe.
Uma uchitha isikhathi esincane nesilwane, khona-ke uzoqala "ukuhamba" ngaphandle kwakho, futhi lokhu kungase kuhawukele indlu yakho. Ikakhulukazi ethinteka ngephepha lodonga, izintambo nakho konke ingulube idla. Uvele nje-u-gnawing. Imodi yosuku lwengulube ifana neyakho. Phakathi nosuku ahamba ngalo, futhi ebusuku ubuthongo. Ngakho-ke, akufanele bahlezi ebusuku bese begijima nxazonke. Ngesikhathi sokukhulelwa, izingulube ziqala ukungena. Ngakho-ke uma ungazange uthumele owesilisa, i-piglet izobonisa isithakazelo esibucayi kumathoyizi akho athambile.
Izingulube ezincane zingesabisa ekuqaleni, kodwa zijwayele ukujwayela ikhaya elisha futhi zixhunywe kumnikazi. Ungathenga uhlobo oluhlukile lwezingubo kumntwana wakho. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngenkathi ebandayo. Emva kwakho konke, lapho kubanda, abavikelwe yisambatho somboya njengamakati. Ungalutholi kunzima kunenja noma ikati. Ungumngane omuhle oyokuthanda.
Ukuzalwa kwezinja Basenji
Ukugcinwa kwezilwane ezifuywayo ezindaweni zokuhlala
I-cheetah - ikati yangempela yasendle
Izinja ezincane zalelo thurier
Indlela yokufundisa inja ukukhipha imiyalo
Indlela yokukhulisa i-puppy ye-spaniel yaseRussia?
Agua de Jamaica (uphuze ne-Hibiscus)
I-anti-cellulite i-massage yamafutha
Indlela yokulungiselela i-ultrasound ekukhulelwe
Yini ongayinika abangani ephathini lonyaka omusha?
Amaphikishi okwenza izitsha okumnandi
Iphariji ye-Buckwheat namaqanda abilisiwe
Hamburger eyenziwe nge-rye isinkwa
Chelka - ubuhle bezimfashini-2016
Ishokoledi yebhayisikili ku-multivark
Izakhiwo eziwusizo zama-chestnuts
Umyeni kaCeline Dion washona
U-Alena Vodonaeva ukhanse umshado, kodwa uzimisele ukubuyela emuva emgqeni
Ukuqoqa umkhawulo womkhiqizo